शाओमी होम सहायक - स्मार्टमे
डोम » श्रेणी 'गृह सहायक' द्वारा संग्रह
यस कोटीमा तपाईले समीक्षा, गाईडहरू र सबै घर सहायक टेक्नोलोजी सम्बन्धित सामग्री फेला पार्नुहुनेछ। सियाओमी अकारा उपकरण र अरू धेरैको बारे थप जान्नुहोस्, जसले तपाईंलाई स्मार्ट घर भएको फाइदाको मजा लिन दिन्छ जुन नियन्त्रण सहज, सहज र सबै भन्दा माथि स्वचालित हो।
घर सहायक के हो
सरल भाषामा भन्नुपर्दा, HA, वा Home असिस्टेन्ट नि: शुल्क स्मार्ट होम सिस्टम हो। यो कसरी सम्भव छ कि हामी समाधानको बारेमा कुरा गर्दै छौं नि: शुल्क? यो खुला स्रोत सफ्टवेयर हो, त्यसैले प्रत्येक सक्षम उपयोगकर्ताले यसको विकासको लागि केहि गर्न सक्दछ। गृह सहायकले विभिन्न प्लेटफर्महरू र कम्प्युटरहरूमा काम गर्दछ - मुख्य रूपमा स्थानीय रूपमा, क्लाउडको आवाश्यकता बिना। सयौं र हजारौं उपकरणहरू एचएसँग एकीकृत हुन्छन्, ताकि तपाईं सजिलैसँग आफ्नो स्मार्ट स्मार्ट प्रणाली विकास गर्न सक्नुहुनेछ उत्पादनहरूको मालिकाना सेट कन्फिगर गरेर, उदाहरणका लागि चिनियाँ कम्पनी शियाओमी।
हाम्रा गाईडहरूमा हामी सुझाव दिन्छौं कि यस समाधानलाई कसरी प्रभावकारी र प्रभावकारी ढ to्गले प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसको आवश्यकताहरू तपाईंको आवश्यकतामा अधिकतम बनाउन के गर्न सकिन्छ। यस विषयमा ज्ञानको लोकप्रियता स्मार्ट घर विचारको विकासको लागि एक निर्माण ब्लक हो। यससँग सम्बन्धित धेरै पक्षहरू पोल्याण्डमा अझै पर्याप्त परिचित छैन।
सियाओमी ती कम्पनीहरू मध्ये एक हो जसलाई धन्यवाद। घर सहायकले बढ्दो लोकप्रियता पाउँदैछ। विशेष रूपमा, सियाओमी अकारा एक स्टार्टअप हो जुन एक चिनियाँ निर्माता द्वारा समर्थित छ र वायरलेस स्मार्ट होम टेक्नोलोजी प्रमोट गर्दैछ।
एक सुसंगत प्रणाली को भाग को रूप मा, तपाईं सेन्सरहरु (सेन्सर), वेबक्याम, फ्लश माउन्ट सकेट, लाइट स्विच, प्रकाश फिटिंग, रिमोट कन्ट्रोल र अधिक धेरै सहित विभिन्न उपकरण कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रणालीको सुविधा पनि अनुकूलता हो। सियोमी स्विचको साथ एप्पल होमकिट उपकरण नियन्त्रण गर्न सम्भव छ। हाम्रो पाठहरूमा हामी धेरै व्यावहारिक शीर्षकहरू समेट्छौं, त्यहाँ व्यक्तिगत समाधानहरूको समीक्षाहरू पनि छन्। तसर्थ, हामी होसियारीपूर्वक पढ्न सिफारिस गर्छौं र तपाईंलाई सिधा सम्पर्क गर्न प्रोत्साहन दिईन्छ यदि तपाईं पढ्ने सामग्रीको प्रभावमा घर सहायकको अर्को पक्षको बारेमा सोच्न थाल्नुहुन्छ भने।
गृह सहायकलाई समर्पित कोटी सिर्जना गर्दै, हामी समीक्षा र परीक्षणहरू दिन सक्दैनौं। यी प्रकारका सामग्रीहरूले तपाईंलाई पोलिश मार्केटमा सकेसम्म चाँडो टेक्नोलोजिकल आविष्कारहरूको बारेमा सिक्न मद्दत पुर्‍याउँछन्।
हाम्रो सम्पादकीय स्टाफले यी लेखहरूलाई धेरै भरपर्दो तरीकाले दुबै फाइदा र हानिलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। शियाओमी र तेस्रो-पार्टी उपकरणहरू धेरै मापदण्डको प्रिज्ममार्फत मूल्या be्कन गर्न सकिन्छ, नियन्त्रण कसरी देखिन्छ सहित, जुन कन्फिगरेसनको बेला आवश्यक छ, अपरेसन सहज हो कि होइन, जुन यस उपकरणमा लगानी गरेर हासिल गर्न सकिन्छ।
यदि तपाईं चयनित उत्पादनको गहन छलफलको अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने नियमित रूपमा हाम्रो साइट भ्रमण गर्नुहोस्। हामी एक सुलभ भाषामा लेख्दछौं जसले अझ उन्नत र पूर्ण रूपमा शुरुवात गर्नबाट रोक्दैन। यद्यपि स्मार्ट घरहरूसँग सम्बन्धित प्रविधिहरू धेरै जटिल देखिन्छन्, हाम्रो लेखहरूमा उनीहरूलाई यस्तो तरीकाले प्रस्तुत गरिएको छ जुन एक सामान्य व्यक्तिलाई पनि बुझ्ने र प्रोत्साहनजनक छ।
कसरी आफ्नै प्रणाली बनाउने? श्याओमी अकारा वा अन्य वातावरण सिर्जना गर्ने उपकरणहरू कसरी कन्फिगर गर्ने? के तपाईं साँच्चिकै स्मार्ट घरमा सेन्सर, क्यामेरा वा दैनिक उपकरणहरू जडान गर्न सक्नुहुन्छ? यी प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा खडा हुन्छन्, परावर्तन र अन्वेषणको लागि नेतृत्व गर्नुहोस्।
त्यसकारण हामी नियमित रूपमा सुझावहरू प्रकाशित गर्दछौं जसले शियाओमीलगायत घर सहायकको बारेमा रुचि राख्ने पाठकहरूको अपेक्षाहरू पूरा गर्दछन्। धेरै क्रियाकलापहरू जटिल देखिन्छ प्राय: चरणबद्ध एक धेरै सुलभ र स्पष्ट तरिकामा व्याख्या गर्न सकिन्छ, विशेष उन्नत ज्ञानको आवश्यकता बिना।
हामी सचेत छौं कि चिनियाँ शैलीको सेटिंग्स वा सेन्सरमा आधारित उपकरणहरू सामना गर्नु जुन पहिले कहिल्यै प्रयोग नगरिएको अवस्था बाहिरी सहयोगको आवश्यक पर्दछ। HA कन्फिगर गर्न, कहिलेकाँही तपाईंलाई थोरै धैर्य र एक विश्वसनीय स्रोत चाहिन्छ - जस्तै हाम्रो वेबसाइट।
BleBox, गृह सहायक, ट्यूटोरियल, समीक्षा
Blebox, एक पोलिश प्रकाश स्विचिंग मोड्युल बाट स्विचबक्स
blebox, स्विचबक्स v3
मैले Polish बर्षमा बजारमा रहेको पोलिश कम्पनी BleBox बाट परीक्षणको लागि mod मोड्युलहरू प्राप्त गरें। स्विचबक्स मेरो समीक्षामा पहिले देखा पर्नेछ। म हार्दिक तपाईंलाई पाठमा आमन्त्रित गर्दछु! मँ कुरा गर्न अघि, तथापि, यो लायक छ ...
BleBox, गुगल गृह, गृह सहायक, समीक्षा
BleBox शटरबक्स। BleBox को साथ रोलर शटर नियन्त्रण
blebox, Blebox शटरबक्स, अंधा, स्मार्ट अन्धा
ब्लेबक्स शटरबक्स भर्खरको रोलर शटर कन्ट्रोल सिस्टम हो जुन मैले मेरो अपार्टमेन्टमा स्थापना गरें। यो म यस्तो प्रणाली को परीक्षण गरीरहेको पहिलो पटक छैन, त्यसैले यस समीक्षा मा म निश्चित रूप बाट अन्य उपकरणहरु लाई संदर्भित गर्दछु जुन तपाईले बजारमा पाउनुहुनेछ। BleBox ...
Apple HomeKit, BleBox, गृह सहायक, समीक्षा
Blebox एयरसन्सर। एयर सेन्सर समीक्षा
blebox, Blebox एयरसन्सर, हावा गुणवत्ता सेन्सर, वायु सेन्सर
हालसालै, मैले परीक्षणको लागि Ultrasmart.pl बाट उपकरणहरूको सेट प्राप्त गरें, र पहिलो समीक्षा उपकरण BleBox एयरसेन्सर हुनेछ, अर्थात् एक वायु गुणस्तर सेन्सर। विन्डो बाहिर धुवाँ पनि मेरो अपार्टमेंट मा तोड्न को लागी कोशिश गरीरहेको छ, त्यसैले मलाई थाहा छ यो समयको लागि हो ...
Amazon एलेक्सा, गुगल गृह, गृह सहायक, समीक्षा
टेडे स्मार्ट ढोका लक - भिडियो समीक्षा
google home, homekit, स्मार्ट लक, tsdee, लक
सबैजना जान्दछन् र गर्डालाई माया गर्छन्! आज हामी उनको सबैभन्दा नयाँ, स्मार्ट लक जाँच गर्दैछौं। अधिक स्पष्ट रूपमा - टेडे महल! यो कसरी काम गर्‍यो? ठीक छ, हामी भन्छौं;)
Apple HomeKit, गुगल गृह, गृह सहायक, समीक्षा, शाओमी होम
आकारा M1S - के यो अकारा हबको योग्य उत्तराधिकारी हो?
Aqar, अकारा हब, आकारा m2, गेट, m1s, m2, mi hub v3, Xiaomi गेटवे v3
आकारका दुई गोलहरू मध्ये पहिलो जुन हामी धेरै महीनाहरूको लागि कुर्दै थियौं। अकारा M1S, नयाँ प्लग-इन गेट। यस्ले कसरी काम गर्छ? के यो अकारा हबको साथ परिवर्तन गर्न लायक छ? समीक्षाको लागि समय! अकारा M1S एक सीधा हो ...
के होम असिस्टेन्ट रास्बेरी पाईको प्रतिस्पर्धी बन्छ?
हार्डवेयर, घर सहायक, घर सहायक निलो, समाचार, सफ्टवेयर
धेरै जसो स्मार्ट होम फ्यानहरूको लागि, नाम होम सहायक र रासबेरी पाई धेरै राम्ररी परिचित छन्। जे भए पनि, वास्तविक स्मार्ट होम वास्तविक "कन्ट्रोल प्यानल" बिना के हुनेछ (म यति राम्रोसँग जान्दछु कि यसमा ...